Sheet gel mangatsiaka / patch tazo / pad gel mampihena
Hydrogel fikolokoloana hoditra
Akanjo ratra Hydrogel
Gel fanamboarana scar
Fehin-tongotra tsy tenona
Patch vita amin'ny maso tsy misy tenona
Sarontava maso mangatsiaka tsy voatenona
miraikitra amin'ny saoka moka hydrogel sofina mihantona fiakarana ...
Patch hydratel microcrystalline Hydrogel
Hydrogel microcrystalline nasolabial fonosana patch
Hydrogel microcrystalline trondro tsipika patch
Avelao aminay ny hafatrao
Ny mpanjifa Japoney sy ny mpanjifa ao an-trano dia manafatra vokatra
Rafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika mangarahara
Mampiasà akora japoney sy teknolojia fanabeazana matotra ny vokatra
Milamina ny kalitaon'ny vokatra, ary ambany dia ambany ny tahan'ny allergy amin'ny vokatra.
Ny vokatra dia mifikitra mafy ary tsy mora milatsaka.
Ny vokatra matotra sy azo itokisana, azo hamokarana betsaka, ary natondrana tany Japon, Korea Atsimo ary firenena maro hafa.
Miraikitra moramora amin'ny hoditra, manala mora foana sy tsy maharary
Ny vokatra mangatsiaka isaky ny ravina dia maharitra hatramin'ny 8 ora.
Tsy mila frizidera.
Mifanentana, azo entina, azo ampiasaina
Ny dokotera dia nanoro hevitra ny hanomezana fanamaivanana amin'ny alàlan'ny tsy fahasalamana mifandraika amin'ny migraines, aretin'andoha, tazo, fanaintainan'ny hozatra, fivontosana, fiezahana be loatra, fikolokoloana na isaky ny mila fanamaivanana ianao.
Tsy fanafody, azo antoka ampiasaina amin'ny fanafody.
Ny fizotry ny famokarana ny ravin'ny gel mangatsiaka ataon'ny orinasa dia mitovy amin'ny fizotry ny famokarana ny empira japoney, ary samy manana ny fomba fanasitranana mihidy. Ny fomba fanasitranana noraisin'ny ankamaroan'ny orinasa an-trano dia ny fanasitranana tsy misy rano. Io no tombony azo avy amin'ny takelaka fihenan'ny gel izay manana atiny mando avo kokoa, ary ny takelaka manify miaraka amin'ny atin'ny hamandoana avo dia mety manala ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanodinkodinan'ny rano, ka mitondra vokany mangatsiaka tsara kokoa.
Mandritra izany fotoana izany dia ampidirina avy any Japon ny akora entin'ny orinasa ary azo antoka kokoa ny kalitaony. Raiso ohatra ny polyacrylate sodium, ny orinasa an-trano ihany koa no mamokatra azy, saingy tsy noraisinay izany. Araka ny fitsapana nataonay tamin'ny akora maro, ny polyacrylate sodium novokarina tany Japon dia manana fanaparitahana sy kalitao tsara indrindra.
Avy eo, miankina amin'ny fenitra avokoa ny biocompatibility ny vokatra sy ny andrana hafa, raha mila izany ianao dia afaka manontany anay amin'ny fotoana rehetra.
Raha fintinina, raha mila mividy takelaka fampangatsiahana ianao dia azonao atao ny manontany anay santionany fanandramana, tsy lafo ny vidinay, ary milamina ny kalitaony.
Teo aloha: Analgesic Transdermal Patch OEM / ODM
Manaraka: Hydrogel microcrystalline trondro tsipika patch
Pading gel milamina
miraikitra amin'ny volom-bava mipetaka amin'ny sofina hydrogel mihantona ...
Hydrogel patch patch ODM / OEM
Analgesic Transdermal Patch OEM / ODM
Firaikitra ketrona tsy voatenona vozona
Sticker amin'ny kentrona tsy misy tenona
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2018, Suzhou Hydrocare Tech dia nekena ho orinasa manan-danja eo amin'ny sehatry ny hydrogel any Shina.
No. 11, Chengpu Road, Shengpu Town, Suzhou Industrial Park Jiangsu Provice, Sina
Fanazavana vitsivitsy momba ny orinasanay ...
Fampandrenesana fangatahana hydrogel amin'ny radio ...